एमाले दोहलीद्धारा तिज गीत प्रतियोगिता – Gulmiews
एमाले दोहलीद्धारा तिज गीत प्रतियोगिता
२५ भाद्र २०७३, शनिबार १८:४१ गुल्मिन्युज
गुल्मी, भाद्र–२५ । गुल्मीको दोहलीमा नेकपा एमाले गाउँ कमिटी र सो पार्टी निकट महिला संगठन अनेम संघले संयुक्त रुपमा तिज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न गरेका छन् । दोहली ३ को छेडा वजार चौरमा भएको तिज गीत प्रतियोगितामा १० टिम सहभागी भएका थिए ।
प्रतियोगितामा रामराज्य उच्च माध्यामिक विद्यालय दोहलीको समुह प्रथम भएको छ । त्यस्तै देविस्थान वचत महिला समुह हस्तीचौर दृतिय भएको छ । भएको छ । दोहली ३ छेडा वजारको तमु महिला समुह तृतिय र ढाँडाको कालिका निमाविको समुह सन्तावना पुरस्कारमै चित्त बुझाउनु परेको छ ।
विजयी समुहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुह अतिथी नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव सोमनाथ सापकोटाले क्रमशः ७ हजार ५, ३ र २ हजारका दरले नगद पुरस्कार र प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।
त्यस्तै सचिवालय सदस्य लक्ष्मण विष्ट लगायतको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रमको सम्पुर्ण दृश्य प्रशारण गर्ने गरी अफिशियल मिडियाका रुपमा रेसुङ्गा टेलिभिजनको टोली त्यस कार्यक्रमा खटिएको छ । नेकपा एमाले दोहली गाउँ कमिटी अध्यक्ष विष्णु सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा . पत्रकार टोपलाल अर्यायको उद्घोषण रहेको थियो ।
Comments comments	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु तीव्र दौडधुपमा